XOG: Maxaa keenay baaqashada Kulankii Madaxda Dawlad gobaleedyada ee Nayroobi, Yaase balanta ka baxay? – Puntlandtimes
NAIROBI(P-TIMES)- Hogaamiyaasha dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa kulan shalay ku yeelan lahaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaas oo ay uga hadli lahaayeen arrimaha siyaasadeed ee ka aloosan gudaha dalka, gaar ahaana siyaasadda kala shaqeysa dawladda Faderaalka.
Baaqashada shirka ayay ka soo baxayaan warar kala duwan, waxaana la sheegay in ay madaxda qaarkood ay si dad-ban u diideen ka qeybgalka shirka, ka dib markii ay dib uga dhaceen waqtigii ay dhinacyadu ku balameen.
Madaxweynaha Puntland oo lafilayay in uu Arbacadii gaaro magaalada Nairobi, ayaa taas bedelkeed ka dagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, isagoo Jimcaha berri ahna ku wajahan magaalada Garoowe ee casumada Puntland.
Madaxweynaha HIRSHABEELLE ayaa si deg deg ah ugu kicitimay shalay magaalada Baladweyne ee gobalka Hiiraan, si uu qeyb uga qaato xalinta arrimo ka taagnaa magaaladaas, gaar ahaana isku dhacyo sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay weerar lagu qaaday saraakiil ciidan.
Hadda, Nairobi waxaa kusugan madaxweynayaasha Galmudug & Jubbaland oo ah labada ugu darnaa ee imika u baahan taageerada siyaasadeed, waxaana ilaa hadda aan la aqoonin waxa uu noqon doono kulankaas.
Madaxweynayaasha Puntland & Hirshabeelle ayaa labaduba miisaan-weyn oo siyaasadeed ku ah dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxaana maqnaanshahooda shirka uusan waxba ka soo baxeynin, maadaama labada maamulba ay hadda maqan yihiin.
Dawladda Soomaaliya & Dawlad gobaleedyada ayaa khilaaf adag u dhaxeeyaa, waxaana dhawaan fashil ku soo dhamaaday kulan ka dhacay magaalada Garoowe, kaas oo ay martigalisay Puntland waxaana uu fashilmay markii ay dhinacyadu waxba tanaasul ah keeni waayeen.